Waxgaradka G/Gedo oo ku dhawaaqay Saameynta ay yeesheen Dagaalada gobolka – SBC
Waxgaradka G/Gedo oo ku dhawaaqay Saameynta ay yeesheen Dagaalada gobolka
Odayaasha iyo Waxgaradka Gobolka Gedo oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo uga soconayay Magaalada Baardheere ee gobolkaasi ayaa ku dhawaaqay in saameyn balaaran ay ku yeesheen dadka deegaanka dagaalada iyo duqeymaha ka jira gobolka.
Waxay sidoo kale sheegeen Odayaasha oo la hadlay Xafiiska SBC ee Gobolkaasi in ka odayaal ahaan walaac baaxad leh ka qabaan falalkan ka socda gobolka islamarkaana ay qeylo dhaan ka soo saarayaan .
Xaaji Daahir Macalin Axmed Waxa uu ka mid yahay waxgaradka Gobolka Gedo waxaana uu sheegay in siweyn ay uga xun yihiin dhibaatooyinka gobolka laga geysanayo, isagoona farta ku fiiqay ciidamada Kenya dhibaatooyinka ay dhaliyeen tan iyo intii ay soo galeen gudaha Dalka .
Waxa uu intaasi raaciyay Xaaji Daahir in uu ugu baaqayo Kenya iyo ciidamadeeda in ay joojiyaan falalkaasi waxuush nimada ah ee ay ku leynayaan dadka rayidka ah isagoo soo qaatay dhacdadii ay ciidamada Kenya dad aan waxba galabsan ugu laayeen deegaanka fax faxdhuun iyo duqeymihii ka dhacay gobolka ee ay geysatay.
Kulanka Waxgaradka gobolka Gedo oo dhamaantiis lagu falanqeynayay isbidelka xaaladaha gobolka iyo saameynta ay geysteen dagaalada ka socda ayaa ugu dambeyntii laga soo saaray baaq iyo cambaareyn ku socda ciidamada Kenya iyo dowlada KMG ah ee Soomaaliya maadaama ay iyadu ogolaatay in dalka ay gudaha u soo galaan ciidamada Kenya .